Waa maxay Autofill?
Autofill waa automatic online form filler heli karaa daalacashada internetka iyo barnaamijyadooda. Waxaa loogu talagalay dadka isticmaala si loo badbaadiyo markii buuxinta foomamka online. Halkii aad qortid faahfaahin kasta hal foom, Autofill si toos ah ayaa buuxin doona dhammaan faahfaahinta aad u.
Autofill ka mid ah sifooyinka ugu waxtarka badan ee macruufka sababta oo ah waxa aad u dhawra u baahan in ay ka faa'iideystaan ​​keyboard taabashada u gaabiyaa waa inay dib usoo sirta ah iyo magacyo iyo macluumaad la xiriiri sida lambarada telefoonka ama cinwaanada emailka. Arrinta Muuqda la Autofill inkastoo la Timaadda iPads caadi ah, iPods iPhone, halkaas oo ay shakhsiyaad badan isticmaali kartaa qalab sidan oo kale u socda bogagga web isla saxda ah, oo markaas aad u hesho qof kale la qortey ama faahfaahin ah ay ka dhergi doonaa. Tani waxay noqon karaan kuwo khatar ah iyo sidoo kale iyada oo suurtagal ah musuqmaasuq. Si aad xog Autofill aad on your iPhone, raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Tuubada "Settings" app icon ka screen guriga aad iPhone in goobaha la furo.
Hoos u riixdaa iyo garaac "Safari".
Tubada "Autofill" ee goobaha Safari.
Hadda ka jaftaa "Saved Passwords" ama "Saved Credit Cards" in ay tirtirto xogta.
Waxaad arki doontaa liiska goobaha iyo usernames badbaadiyey, tuubada "Edit" ee xaq u top dooro macluumaadka aad rabto in aad tirtirto oo markaas "Delete" biddix ee kore ka jaftaa.
Si aad u tirtirto faahfaahin credit card, dooro ikhtiyaarka credit card ah. Waxaad arki doontaa liiska kaararka deynta badbaadiyey, ka jaftaa "Edit" ee xaq u top dooro macluumaadka aad rabto in aad tirtirto oo markaas "Delete" biddix ee kore ka jaftaa.
Sifooyinka kale ee AutoFill
Wixii macluumaad adiga kugu saabsan sida cinwaanka iyo in joogo joogto ah magaca, feature AutoFill barnaamijka Safari si toos ah u qabanaysa ee ka mid ah meelaha la wadaago si wadajir ah ula aad halkii info shaqsi u baahan in aad buuxisid beeraha kuwa si gooni gooni ah la isticmaalayo tuubada kaliya. Safari sidoo kale kala socon kartaa sirta ah iyo magacyada user iyo info credit card. Marka aad brand akoon cusub web site waxa dheeraad ah a, weyddiiyaan Safari ay dhacdo in aad jeclaan lahayd in uu korka iyo xitaa dhalin sir ah oo aad u ku gaar ah.
Contact Info: Safari buuxiyo in talo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan noocyada online. Taasi info gaarka loo leeyahay waxaa laga helay faahfaahinta ee app Xiriirada. Magacaaga shakhsi Waxaad arki doontaa in ay ku xiran 'doorasho Info aan'.
Haddii aad buuxinta tuubada AutoFill on keyboard, nooc ka mid ah iyo Safari buuxin doonaa macluumaadka aad ku badbaadi magaca, cinwaanka, lambarka taleefanka, iyo e-mail address beeraha ka kaarka xiriir gaar ah oo bleach kuwa macluumaad u beeraha ku haboon.
Magacyada iyo Passwords: Haddii aad rabto in aad Safari in la xasuusto wax username iyo password, waxaad isticmaali kartaa Doorashadan oo ah AutoFill in ay sameeyaan in. Sidaas, mar kasta oo aad rabto in aad gal goobta a, aad uma baahna in ay mar kale galaan username iyo sirta ah.
Kaararka Credit: sifo Tani waxay noqon kartaa timesaver dhab ah haddii ay dhacdo in aad internetka alaab. Haddii aad leedahay doorasho Credit Cards firfircoonaan, aad si fudud u soo iibsan karin waxyaabaha aad online ku iibsan aan khaanada ee lambarka kaarka deynta. Info kaarka bangiga ayaa si toos ah uga buuxsami doonaan in ay Safari. Tubada kaarka aad jeclaan lahayd inaad bixiso leh.
Isticmaalka Autofill aad iPhone noqon kartaa faa'iido aad u weyn oo aad u gaar ahaan haddii aadan jeclaan waqtiga oo dhan aad qortid. Iyadoo Autofill, buuxinta foomamka ayaa had iyo jeer u fududahay. Ma jirto baahi aad u qor faahfaahsan kasta oo foomkan ku saabsan telefoonka, sababtoo ah waxaa si toos ah u buuxin doonaa wax kasta oo aad u. Waxa ay taageertaa magacyada, cinwaanada, lambarada Phone, iwm Waxa kale oo ay taageertaa credit card kaas oo ah Goof cusub oo kuwa internetka alaab ka taleefannadooda.
Haddii aad tahay nooca in uu yahay taxadarto aad telefoon ama aad dadka siin telefoonka ha ahaatee, ka dibna AutoFill noqon kartaa faa'iido darro weyn. Tan aad leedahay xogta gaarka ah aad ku kaydsan sida credit badiyay aad telefoon ama siinta qof aad telefoon noqon doonto dhibaato aad u.
> Resource > masixi > Sida loo Cad Autofill on iPhone